Soo Iibsan bulk bullaar kor loo qaado (171596-29-5) Soosaarayaasha & Warshadaha
Budada Tadalafil, oo lagu iibiyo magaca cialis Cialis iyo kuwa kale, waa daawo loo isticmaalo daaweynta xinjirowga erectile (ED), dhiig-karka qanjirka 'prostatic hyperplasia' (BPH), iyo hypertension pulmonary arterial. Waa kiniin afka laga qaato. Bilawga caadi ahaan waa nus saac gudaheedna muddaduna waxay u dhigantaa saacadaha 36.
Cialis (Tadalafil) budada Video
Budada Cialis (Tadalafil) Description
1.Waa maxay budada Tadalafil?
Budada Tadalafil, walxo cayriin ee tadalafil, waa nooc ka mid ah budada cad, inta badan waxa loo isticmaalaa in lagu sameeyo kiniinada tadalafil. Daroogada Tadalafil, aslo la yiraahdo / Cialis, waa mid ka mid ah daawooyinka loo yaqaan PDE-5 (Phosphodiesterase nooca 5). Tadalafil / Cialis wuxuu kordhiyaa muruqyada xididdada dhiigga waxana uu kordhiyaa socodka dhiigga meelaha gaar ah ee jirka. Tadalafil / Cialis iyo kuwa kale ee PDE-5 waxay ka caawin karaan ragga qaba xanuunka erectile (ED) iyada oo kor u qaadeysa jawaab celinta qalafsan marka qofku galmo u kiciyo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn (cirbadeynta) iyo astaamaha hurgunka prostatic hypertrophy (prostate). Badanaa dadku waxay ka soo iibsadaan budada tadalafil oo ka samaysan badeeco badeeco ah oo tadalafil ah. Ka sokow Tadalafil / Cialis, daroogooyinka kale ee fasalkan waa Viagra (Sildenafil) iyo Levitra (Vardenafil), iyo Flibanserin.
2.Sida loo qaato budada tadalafil?
Xusuusin Muhiim ah: Cialis waa in aan la qaadin nitrates sababtoo ah awoodda ay u leedahay inay hoos u dhigto cadaadiska dhiigga. Nitrate-yada looma qaadan karo ugu yaraan saacadaha 48 kahor intaan Cialis isticmaalin dadka isticmaala badiilka badan ee u baahan in laga fogaado tan iyo dhammaan PED5.
3. Sidee looga sameeyaa kacsiga dareeraha ah ee budada ah?
1) 2 Muraayadaha “Cabbir-Yar” dhalooyin Aalkolo ah (50mL midkiiba). Kuwaani waxaa laga iibsan karaa miiska dukaanka khamriga.
2) 2g (budada Tadalafil) Budada Cialis budada cayriin.
3) “Dheecaan dawada”, oo ah kaliya dhuumaha / dhuuxa / xargaha leh xariiqyo la calaamadeeyay si loo muujiyo inta dareeraha ku jira.
4) Weel yar oo galaas / dhalo / weel. Waxaan ku dhammaaday anigoo isticmaalaya weel duug ah oo Solgar ginseng ah. Muraayada ayaa ugu nabdoon kiiskan haddii aad rabto inaad kaydiso Cialis-kaaga muddo dheer.
1) Dalbo 2g oo ah budada cayriin ee tadalafil.
2) Farmashi / tuubada daawada ka raqiisan farmashiyaha xaafadaada $ 2- $ 4.
3) Tag dukaanka khamrigaaga oo iibsato 2 yar oo ah 50mL dhalo khamri ah.
4) Ku nadiifi foornada dhalada / weelka ama hubso in uu yahay mid nadiif ah.
5) Ku shub dhalada khamriga ku rid dhalada galaaska.
6) DHAMMAAN budada ku shub weelka galaaska. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad isticmaasho barkad laakiin haddii vial leeyahay af ballaaran oo ku filan, waxaad si toos ah ugu shubi kartaa qashinka.
7) Ku shub dhalada kale ee khamriga ku rid dhalada galaaska.
8) Daboolka gadaashiisa ku dheji daboolka dhalada oo si adag u xir.
9) Si adag u rux ka hor inta aan la saarin qiyaasta.
Isticmaalka qaabkan iyo tirada (2g ee budada cayriin ee Tadalafil, 100 mL ee dareeraha khamriga), soo saarista 1 mL ee isku darka cusubi waxay la mid tahay 20mg budada. Tani waa hal daawo oo Cialis ah. Si aad amaan u noqoto, waxaad ku bilaabi kartaa nus-qaadasho. Tani waxay noqon lahayd 0.5 mL (badh ka mid ah '1 mL) oo ka soo baxa dhalada galaaska. Hubso inaad ruxdo ka hor qadarka kasta. Markuu ruxmayo, dhalada ayaa cadaan cad oo qurux badan leh.
4.Budada Tadalafil for sale
Daawada dawada ee degmada, ama isbitaalka, si sahlan ayaan u arki karnaa ciyaalka, taas oo ah tadalafil. Haa, waa tan budada tadalafil - mid ka mid ah codsiyada ugu caansan waxaa loo sameeyey daroogada daaweynta ED, badanaaba waa nooc kiniinno ama kaniiniyo ah, marka lagu daro xaqiiqda, tadalafil ayaa sidoo kale loo adeegsaday marxalado kale, sida :
Tadalafil waxaa lagu dari karaa nacnac si loo sameeyo candhuuf caadi ah si kor loogu qaado baahida galmada ragga. Waxaa jira noocyo badan oo macmacaan galmood ah oo Malaysia ah, maaddooyinka ugu muhiimsani waa caadi ahaan budada tadalafil, iyo budada sildenafil.
Annaga, mararka qaarkood si aan u helno saameyn xoog leh ama saameyn liidata, waxaan sameyn karnaa galmada galmada annaga oo ku darin galmada kor u qaadida budada tadalafil, marka loo eego baahida macmiilka si loo sameeyo saameynta heerka kafeega kala duwan. Taasi micnaheedu waa, budada tadalafil ayaa kaa caawin kara in lagu sameeyo kafee galmada.
Budada Tadalafil ee khamriga / cabitaanka galmada
Waxa kale oo lagu dari karaa daryeelka caafimaadka. Khamriga laftiisa ayaa kordhay saameynta socodka dhiigga, waxaa la fahamsan yahay in khamriga casriga casriga ah uu kordhin karo socodka dhiigga haweenka, ragga si loo kordhiyo heerka testosterone ee dhiigga, laakiin saamaynta khamrigu waa mid fudud. Oo markaa budada lagu daro budada ah waxaa lagu hagaajin karaa xaddiga loo baahan yahay, cabitaanka cabitaanku wuxuu ka caansan yahay ragga suuqyada ah, gaar ahaan ragga da'da yar.
5.W Halkee Iibsataa Tadalafil Powder?
BUYAAS waxay ku raaxeysataa xiriir dheer oo lala yeesho macaamiisheenna sababta oo ah waxaan diiradda saareynaa adeegga macaamiisha iyo waxaan soo bandhignaa alaabada waaweyn. Haddii aad xiiseyneyso badeecadeena, waxaan la qabsaneynaa qaabaynta amarrada ku habboon baahiyahaaga gaarka ah iyo waqtigeenna dhakhsaha ah ee hoggaanka amarada dammaanad-qaadista waxaad kaheli doontaa inaad dhadhamiso badeecadeena waqtigeeda. Waxaan sidoo kale diirada saareynaa adeegyada qiimeynta ku jira. Waxaan diyaar u nahay su'aalaha adeegga iyo macluumaadka si aan u taageerno meheraddaada.
Waxaan nahay bixiye xirfadle ah Tadalafil budada sanado dhowr ah, waxaan ku siineynaa alaabo qiimo leh tartan, wax soo saarkeenuna waa tayada ugu sarreeysa wuxuuna ku socdaa tijaabooyin adag, madax-bannaan si loo hubiyo inay aamin u tahay isticmaalka adduunka oo dhan.
Cialis (Tadalafil) budo Smamnuucista
Magaca Kiimikada (6R,12aR)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Fasalka Daroogada PDE5 inhibitor
Molecular Wsideed 389.411
barafku Psaliid 301-302 ° C
Boiling Point 679.1 ± 55.0 ° C ee 760 mmHg
Biological Life-Life saacadood 36
Application Tadalafil oo hoos yimaada magaca 'Cialis' waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo unugyada ku dhaca 'erectile dysfunction (impotence') iyo astaamaha qanjirka 'prostate hypertrophy (qanjidhada balaaran). Nooca kale ee kor u kaca ee loo yaqaan 'tadalafil' waa Adcirca, oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhiig karka sambabada iyo in la wanaajiyo awooda jimicsiga ee ragga iyo dumarka.